मत्स्य जयन्तिकाे धार्मिक महत्व। – Digital Khabar
०१ बैशाख, काठमाडाै । मिति २०७८ साल वैशाख १ गते चैत्रशुक्लपक्ष दुतिया तिथि बिहान ११ / १७ बजेसम्म त्यस उप्रान्त तृतिया तिथि अारम्भ भएकाेले याे दिन मत्स्य अवतार जयन्ति हाे।त्यसैले हिन्दू धर्म अनुसार भगवान श्री विष्णुको अवतार मध्येकाे प्रथम हाे।मत्स्यावतारमा भगवान बिष्णुले माँछाको रूप लिनु भएकाे थियाे। हिन्दु धर्म ग्रन्थका अनुसार प्राचिन कालमा सत्यव्रत नामका एक राजा थिए ।उनी ठुला उद्धारवान र भगवानका परम भक्त थिए । एक दिन उनी कृतमाला नदीमा तर्पण गर्न लागेका थिए यसै बेला उनको हातमा एक सानो माँछा आयो ।माँछाले राजालाई भने “हे! महाराज यी नदीका जिव तथा ठुला माँछाहरूले मलाई खान्छन् अत: तपाईँ मेरो रक्षा गर्नु होस् ।” माँछाको विन्ती सुनेर दयालु राजा सत्यव्रतले माँछालाई आफ्नो कमण्डलुमा राखे ।
केही छिनमै मत्स्य बढेर कमण्डलुमा न अटाउने भए ।यो देखेर उदार वादी सत्यव्रतले मत्स्यलाई एक मट्कामा राखे ।केही छिन पछि मत्स्य बढेर मट्कामा पनि न अटाउने भए ।यो देखेर राजाले पुन: मत्स्यलाई एक तलाउमा राखे ।केही छिनमै मत्स्य तलाउमा पनि न अटाउने भए ।अन्तमा राजा सत्यव्रतले हार मानी मत्स्यलाई समुद्रमा छोड्ने निधो गरे । यो देखेर मत्स्यले “महाराज ! समुद्रमा त झनै ठुला जलिय जिवहरू छन् तिनले मलाई खाई दिन्छन् मलाई समुद्रमा न छोड्नुहोस्” भनि विन्ती गरे । मत्स्यको यो मधुर वाणी सुनेर राजा मोहित भए राजाले भगवानको लिला हो भन्ने थाह पाए ।राजाले हात जोरेर भगवान मत्यको प्रार्थना गर्न लागे ।
प्रभु! हे गुण निधान! जति मैले यो संसारमा चिजहरू देख्छु तपाईँले त्यो सबैलाई एकै छिनमा नास गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईँबाट नै यो सृष्ठीको शृजना भएको हो ।तपाईँ नै यसको पालन गर्नु हुन्छ । तपाईँ एक अदृश्य शक्तीको रूपमा व्याप्त हुनुहुन्छ । यो संसार तपाईँको शरीर हो, चन्द्रमा र सूर्य तपाईँका नेत्रहरू हुन्, यो वायू तपाईँको स्वाँस हो । मेघहरू तपाईँका केश हुन् । तपाईँको लिला ठूला ठुला नारद, वशिष्ठ, कश्यप दुर्बाशा,आदी तपश्वी ऋषि मुनीहरू इन्द्र, बरुण, ब्रह्मा, आदी देवतागणहरूले त थाहा पाउन सक्दैनन् भने म एक सामान्य मर्त्य चोलाको मनुष्यलाई के थाहा हुनु मैले तपाईँको लिला थाहा न पाएर जो आफ्नो घमण्डीपना देखाएँ त्यसमा मलाई क्षमा गर्नु होस् ।
म मात्र नभएर यो सारा जगत नै तपाईँको दाश हो । मेरो भक्ती ठूलो थियो जसले गर्दा तपाईँले म माथी कृपा गरेर दर्शन दिनु भयो म धन्य हुँ जसको दर्शनको लागि यो सारा जगत नै तडपीरहेको छ उनको मैले सहजै दर्शन पाएँ र सेवा तथा प्रार्थना गर्न पाएँ । जसको बल वायू समान छ, जसको पानीको जस्तै मधुरता र सूर्य समान तेज छ । जसमा फूल समान कोमलता र विजुली झैँ चमक छ । जसको मेघको समान वाणी छ जो चराचर जगतको सृष्टी कर्ता, पालन कर्ता र संहार कर्ता हो उन प्रमेश्वरलाई मेरे बारम्बार प्रार्थना छ ।
मत्स्य भगवान सत्यव्रतको प्रार्थनाबाट खुसी भएर आफ्नो प्यारो भक्त सत्यव्रतलाई भन्न लाग्नु भयाे।भक्त ! आजको सातौँ दिनमा तिनै लोक प्रलयकालको जलराशीमा डुब्ने छ । त्यसबेला मेरो प्रेरणाले तपाईँ सामु एक ठूलो डुङ्गा आउने छ । तपाईँले सबै जिवहरू र अन्नहरूको बिज लिएर त्यसै डुङ्गामा सप्तर्षिहरूका साथमा बसेर घुम्नु आँधी र हुरीका कारण नाउ डगमगाउन लाग्ने छ । त्यसै बेला म यसै माँछोको रूपमा तिमीहरूको रक्षा गरौँला ।” यति भनेर भगवान अन्तर्ध्यान भए । न भन्दै सातौँ दिनमा सत्यव्रतको सामु सबै पृथ्वी जलमा डुब्न लाग्यो । राजालाई भगवानको कुरा याद आयो उनले एक नाउ देखे । उनी बिउहरू लिएर सप्तर्षिहरूका साथ त्यसै नाउमा बसे ।
केही छिन पछि समुद्रमा भयंकर आँधी आयो आँधीका कारण नाउ डगमगाउन थाल्यो । सप्तर्षि लगाएत राजा सत्यव्रतले भगवान मस्त्यको ध्यान गरे । त्यसैबेला समुद्रको विचमा विशाल मत्स्य रूपमा भगवान प्रगट भए नौका सवार आठै जनाले आफ्नो नाउ माँछाको सिँगमा बाँधे । त्यसपछी भगवानले प्रलयको समुद्र बिहार गर्दै सत्यव्रतलाई ज्ञान र भक्तिका उपदेशहरू दिए । हयग्रिव नाम गरेको राक्षसले वेदहरूलाई चोरेर समुद्रमा लुकाई राखेको थियो भगवान मत्स्यले हयग्रिवलाई मारेर वेदहरूको पनि उदार गर्नु भएको थियो ।